မျက်ခုံးပါးလို့ ပုံစံ မကျ လို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ကိုကို မမ များ – YaMeiShih
“" LOOK BEAUTIFUL FEEL BEAUTIFUL" ”
No. 57 A, Thar Yar Shwe Pyi St, Yankin Tsp, Yangon.
+959 790 634 535, +959 790 634 536, +959 790 634 537
FRUIT ACID PEELING | BODY SHAPING
DERMATOLOGY HEALTH INSURANCE
Yameishih Skin Special Clinic
Home - Blog - Beauty News
မျက်ခုံးပါးလို့ ပုံစံ မကျ လို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ကိုကို မမ များ
ထုံဆေးမလို သွေးထွက်ခြင်းမရှိနာကျင်ခြင်းမရှိ တဲ့ မျက်ခုံးဆွဲသားခြင်း နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သဘာဝကြပြီးနူးညံသောမျက်ခုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်…မျက်ခုံးထိပ်အရောင်သည်အဓိကအရေးပါပါသည်။
ကံပွင့်ပြီး လာဘ်လာဘကောင်းစေသောမျက်ခုံးထိုးခြင်း၊ မျက်ရစ်ဖော်ခြင်း (အပေါ်အောက်) နှုတ်ခမ်းဆေးသွင်းခြင်းများကို သွေးထွက်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းမှု မရှိခြင်း၊ နာကျင်မှုမရှိ ကြောင်း အာမခံခြင်း၊ အသုံးပြုသောဆေးများမှာ သဘာဝဆေးများဖြစ်ပါတယ်။
Eye liner ဆွဲသားရင်မညီမညာနဲ့ဖြစ်နေလို့စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသူများ အတွက် တရေးနိုးထကြည့်ရင်တောင် လှပသေသပ်တဲ့ မျက်လုံးတစုံကိုပိုင်ဆိုင်ချင်နေပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ YaMeiShih Skin Specialist Clinic & Laser Beauty Center ကနေပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့်ဆရာမ
Ms. Nang Kein Kham
A native of born on isanano fide Member of MICRO-PIGMENTATION DEVELOPMENT ASSOCIATION OF R.O.C, Taiwan.)
Complete Silver Nano 3D Permanent and Make-up training Courses in good Faith Organized by the Association of Southern-East-Asia Beauty မှ
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများအသုံးပြုပြီးှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကြကျေနပ်သည်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ပေးနေပါပြီရှင်။
ပြုလုပ်ခြင်ကြသော ကိုကို မမ များ ဖုန်းလေးသာလှမ်းဆက်ပြီး booking တင်လို့ရပါတယ်နော် ။
လိပ်စာ : အမှတ် ၅၇ (က) . သာယာရွှေပြည်လမ်း . ရန်ကင်းမြို့နယ် . ရန်ကုန်မြို့ .
ဖုန်း ။ 01-513762 ၊ 09790634535-38
Ya Mei Shih was founded in 2010, to bring the best products and latest techniques in beauty care to the Myanmar market. With products from USA and Europe together with expert from Taiwan. We provide life charging beauty in stylish surrounding conveniently located in the center of Yangon…
Monday - Sunday, 9am -6pm
Botox face-lift/thin legs
Causes of hair loss and hair loss clinic
Eczema (contact dermatitis
Ellanse Anti-wrinkle Firming
Microcrystalline porcelain rhinoplasty / chin pad
Yameishih Permanent Makeup Training & Skin Threapy School
Ronby - Copyright 2019 Yameishis Skin Specialist. Developed by MM Cities